Budata Battlefield Mobile APK maka Android
Budata Battlefield Mobile
Budata Battlefield Mobile,
Battlefield Mobile bụ otu nime egwuregwu FPS kachasị mma nke enwere ike ịkpọ na ekwentị gam akporo. Battlefield Mobile, egwuregwu ekwentị mmadụ mbụ na-agba ụta nke Electronic Arts mepụtara, enwere ike ibudata ya nefu na Storelọ Ahịa Google Play. Maka ndebanye aha nke Battlefield Mobile, ị nwere ike pịa bọtịnụ nbudata Battlefield Mobile dị nelu, ị nwere ike bụrụ otu nime ndị mbụ na-egwu egwu mgbe beta Battlefield Mobile pụtara. A ga -atụkwasị OBB Battlefield Mobile APK ka ọ bụrụ ihe ọzọ mgbe ewepụtara egwuregwu ahụ.
Ebe a na -alụ ọgụ Mobile APK Download
Kpọkọtanụ ndị otu gị wee duru mwakpo ahụ! Usoro usoro nọgbọ agha dị na ekwentị mkpanaaka nwere ihe ngosi mbibi nke na -egosipụta nọgbọ agha, egwuregwu otu dị elu, ọgụ FPS!
Otu na Battlefield Mobile. Gị na ndị otu gị ga -ebuso mwakpo na maapụ na ụdị nke ndị egwuregwu ọhụrụ na ndị agha maara nke ọma. Rụpụta ezigbo ngwa ọgụ na ụgbọ ala na-agbanwe egwuregwu. Na -alụ ọgụ maka ịchịkwa ụgbọ ala siri ike dị ka tankị na ATV.
Nweta ikuku ama ama nke Battlefield na ụdị egwuregwu niile. Egwuregwu ọ bụla agaghị echefu echefu, ma ọ bụ ATV gị ka ị na -esi na ụlọ elu dara ada, na -efegharị site na ụlọ mgbe ị na -agba egbe roket, ma ọ bụ na -eli ndị iro gị nokpuru mkpọmkpọ ụlọ nke gị na tank gị bibiri.
Nwee ahụmịhe egwuregwu egwuregwu na-enweghị atụ na ndị ọzọ na-agba ụta site na maapụ na ọnọdụ ọ bụla dị. Mwakpo, Nkwado, Ọgwụ ma ọ bụ Recon, họrọ klaasị gị. Mgbe ahụ mepụta ngwa ọdịnala gị site na nnukwu ngwa ọgụ, akpụkpọ anụ, ụgbọ ala akọwapụtara na ndị ọzọ. Ngwá agha kachasị ike gị bụ klaasị na ngwa iji kwekọọ nụdị playstyle nke gị. Mgbe oge ruru ịkwaga, ala ahụ na -enye ike atụmatụ enweghị njedebe. Na -eje ije nụkwụ maka ịdị akọ. Nye ATV iwu maka ọsọ mgbawa na ihe ịtụnanya. Sneak na -eji ngwa ọgụ melee. Duru mkpọsa ujo na oke ụjọ nime tankị zuru oke. Akpa igbe gị bụ iwu gị. Lụọ ọgụ nelu ala, oke osimiri na ikuku.
Soro ndị dike gị lụ ọgụ wee weghara ebe agha. Soro otu ndị agha ma ọ bụ mepụta ndị otu iji tinye aka na nnukwu esemokwu wee nweta ụgwọ ọrụ. Tụgharịa agha ahụ maka ihu ọma gị ka ị na -eme atụmatụ, mkpebi otu ma zụlite ndị agha gị. Chebe, bibie ma lụọ ọgụ maka nlanarị na egwuregwu otu dị elu na ọtụtụ mmadụ, ozi na ihe ndị ọzọ, ụdị egwuregwu dị iche iche.
Chọta playstyle nke gị ma hazie onye agha gị ka iwelie ikike gị. Enwere ike ịhazi ngwa agha, ngwa, skins na ndị ọzọ ka ọ dabara na klaasị gị na ọganihu gị. Ndị dike agha nwere akụkọ pụrụ iche na -akwado maka agha, onye ọ bụla nwere ọrụ nke ya. Mụta akụkọ ha, mikpuo onwe gị nagha wee pụọ na nhazi kachasị mma nọgbọ agha. Nagbanyeghị otu ị si alụ ọgụ, nka nke aka gị dị elu na usoro otu etinyere ga -eduga gị na mmeri.
Kedu mgbe Mobile Battlefield na -apụta?
Battlefield Mobile, nke DICE jiri Industrial Toys mepụtara, dị maka nbudata na gam akporo Google Play Store mbụ, maka Indonesia na Philippines. Battlefield Mobile abụghị ndebanye aha, ọ bụ ule egwuregwu mbụ, enwere ike itinye ya na ekwentị nwere sistemụ arụmọrụ Android 7.0. Ụdị egwuregwu izizi gụnyere map Grand Bazaar na ọnọdụ egwuregwu mkpọsa. Battlefield Mobile nweere onwe ya igwu egwu ma chọọ njikọ ịntanetị na -arụ ọrụ. Battlefield Mobile ga -enwe naanị ihe ịchọ mma ma nwee Pass Pass nke ya. Agaghị enwe nkwado maka ịgafe egwuregwu na njikwa ma ọ bụ ụdị PC. Ọ bụ ezie na ekwuputabeghị maka ụbọchị mwepụta nke Battlefield Mobile, a na -eme atụmatụ na a ga -ahapụ egwuregwu ahụ na 2022 mgbe nnwale beta nke obodo pere mpe.
Battlefield Mobile Ụdịdị
Mmepụta: Electronic Arts
Kacha ọhụrụ na: 12-09-2021
Simulator ohi obodo bụ egwuregwu mkpanaka dị ka GTA nke ị nwere ike ịnụ ụtọ igwu egwu ma ọ bụrụ na...
PUBG: New State bụ ohuru ohuru royale maka ndị na-echere PUBG Mobile 2. Egwuregwu royale ahụ PUBG...
Squad Alfa na-ewere ọnọdụ ya nelu ikpo okwu gam akporo dị ka ọ dị mfe ịmara, imikpu, onye na-agba...
Oge ụgbọ mmiri nke oge a bụ egwuregwu gam akporo ebe ị nyere iwu ka ị lụọ ọgụ na epic online naval...
Crossfire: vlanahụ Zombie shooter bụ a zombie shooter egwuregwu nanị na gam akporo nelu ikpo okwu....
Clan N bụ Beatem up mobile edinam egwuregwu na-agwakọta kpochapụwo Egwulegwu egwuregwu na taa nke...
Mario Kart Tour adọta uche dị ka a ohuru mobile edinam egwuregwu na ị nwere ike igwu na gị mobile...
Kwadebe maka ụdị ọgụ Pokemon ọhụrụ na Pokemon UNITE! Bịanụ elu ma chee ihu na otu ọgụ 5v5 iji hụ...
Egwuregwu dị elu! Bụ egwuregwu egwuregwu egwuregwu na-atọ ụtọ nke ukwuu ebe ị ga - anọchi agwa ị na...
Hụrụ Master 3D: Ogbugbu nke Blade bụ otu nime egwuregwu mkpanaka m chere na ndị hụrụ ihe nkiri spy...
Ezubere maka gam akporo, Zombie Frontier 4 bụ egwuregwu zombie mbụ mara mma. Ndị na-egwu egwu...
Soro na agha royale siri ike na nke a pụrụ iche dị elu-ala-na-otu onye na-agba égbè. Wepụta oge ma...